Tag: mfe oru ngo | Martech Zone
Tag: mfe oru ngo
5PM: SaaS njikwa oru ngo zuru oke
Bọchị Sọnde, Machị 23, 2008 Saturday, October 25, 2014 Douglas Karr
Otu n'ime ihe ịma aka site n'inwe ndị na-eto eto ma ọ bụ ndị na-emepe emepe bụ nanị ịnwa ịchụso na ibute ọrụ gị ụzọ. M na-arụ ọrụ na-erughị atọ outsourced ego, otu onye n'ime oké osimiri. Ọ dị ka mgbe ị kewasịrị ụbọchị ọrụ n'etiti oge oge, ị na - ewebata igbu oge n'ihe niile ị na - eme. Enwetara m pịa mgbe m kwụsịrị Basecamp otu afọ gara aga. Ihe isi ike bụ na, mgbe m banyere ọhụrụ m